September 2017 – Page2– Eleven Media Group
ယခုနှစ် ခုနစ်လအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ အရက်အမူးလွန်သေဆုံးသူ ၁၂၁ ဦးရှိကြောင်း သိရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၍ ယခုနှစ် ခုနစ်လအတွင်း အရက်အမူးလွန် သေဆုံးသူဦးရေ ၁၂၁ ဦးရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ မှုခင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်ပွားမှုစာရင်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအစမှ သြဂုတ်လကုန်အထိ အရက်အမူးလွန် သေဆုံးသူစာရင်းဖြစ်ပြီး ဇန်န၀ါရီလတွင် ၁၆ ဦး၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁၃ ဦး၊ မတ်လတွင် ၂၃ ဦး၊ ဧပြီလတွင် ၂၄ ဦး၊ မေလတွင် ၂၁ ဦး၊ ဇွန်လတွင် ၁၂ ဦး၊ ဇူလိုင်လတွင် ၁၀ ဦး၊သြဂုတ်လတွင် နှစ်ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်း မှုခင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ် ၁၈ ရက်က ဒဂုံအရှေ့ မြို့နယ်ရှိ ရေမြောင်းတစ်ခုအတွင်း၌ အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦး ပြင်ပ ဒဏ်ရာမရှိဘဲ ရေနစ်သေဆုံးနေသည်ကို သတင်းရသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးရာ အဆိုပါ အမျိုးသားမှာ အရက်အလွန်အကျွံသောက် စားတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အရက်မသောက်ဘဲဖြတ်ထားသည်မှာ ၁၀ ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အရက်ဖြတ်ထားသဖြင့် စိတ်ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်ကာ ရေထဲသို့ခုန်ချလေ့ရှိသူ ဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးတွေ့ ရှိခဲ့ကြောင်း မှုခင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
အလားတူ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၁ ရက် နံနက် ၅ နာရီခွဲကလည်း မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် ရဲတပ်ကြပ်တစ်ဦးသည် ၎င်းနေထိုင်သည့် နေအိမ်လိုင်းခန်းသို့ ပြန်သွားခဲ့ရာ အရှည်ငါးပေခွဲ၊ အကျယ်နှစ်ပေခွဲခန့်ရှိသည့် သစ်သားတံတားပေါ်၌ လမ်းလျှောက် စဉ် အမူးလွန်ပြီး ရေမြောင်းအတွင်းသို့ ပြုတ်ကျခဲ့ကာ ရုတ်တရက်ပြန်မတက်နိုင်ဘဲ ရေနစ် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မှုခင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်အတွင်း တရားဝင် ၊ တရားမ၀င်ရောင်းချသော အရက်တံဆိပ်ပေါင်း ၁၃၀ ကို စစ်ဆေးခဲ့ရာ အရက်ဆီများတွင် အန္တရာယ်ရှိ Methyl Alcohol နှင့် Fusel Oil များ လွန်ကဲစွာပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လအတွင်းက သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အရက်မသောက်ရ မနေနိုင်သည့် အရက်စွဲရောဂါရှိသူများ အပါအ၀င် အရက် ကို စွဲစွဲမြဲမြဲသောက်သူများသည် အရက်ကြောင့် အစားဝင်သည့်လမ်းကြောင်း အာခံတွင်းမှစ၍ အစာမျိုသည့်ပြွန်၊ အစာအိမ်၊ အူသိမ်၊ အူမမှ အသည်း၊ ကဆီအိမ်(ပန်ကရိယ)ကျောက်ကပ် စသည့် အရေးကြီး အစိတ်အပိုင်းများကို အရက်၏အဆိပ်ကြောင့် ပျက်စီးစေကြောင်းနှင့် ထိုအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများ သာမက ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောများကိုပါ ထိခိုက်စေကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on ယခုနှစ် ခုနစ်လအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ အရက်အမူးလွန်သေဆုံးသူ ၁၂၁ ဦးရှိကြောင်း သိရ
ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားသော အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို သက်တမ်းတိုး
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က နယူးယောက်မြို့၌ လုံခြုံရေးကောင်စီက ပြုလုပ်သော မြန်မာ့အရေး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် (Photo: AFP)
ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံ (အထူးသဖြင့် ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် သိန်းနှင့်ချီလျက် ထွက်ပြေးစေခဲ့ရသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်) တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော မတော်မတရားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တစ်ရပ်ကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသည် ဥရောပသမဂ္ဂက တောင်းဆိုထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ရှာဖွေရေး မစ်ရှင်ကို နောက်ထပ် ခြောက်လ အချိန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်းများစွာက ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ခပ်ကင်းကင်း နေခဲ့သော်လည်း မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ ယင်းကိစ္စကို နိုင်ငံပေါင်း ၄၇ နိုင်ငံပါသော ကောင်စီ၌ မဲခွဲရန် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း မရှိသောကြောင့် ယင်းအဆိုပြုချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်လွှား (အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်များကို ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များအပေါ် အဓိကထားလျက်) ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် မတ်လတွင် မစ်ရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူနည်းစု မွတ်စလင်များကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ငြင်းပယ်ကာ ဘင်္ဂါလီများ သို့မဟုတ် ခိုးဝင်လာသူများဟု သတ်မှတ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
သြဂုတ် ၂၅ ရက် နောက်ပိုင်း ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် သန်းထက်ဝက်ခန့်သည် ကုလသမဂ္ဂက လူမျိုးစုလိုက် သုတ်သင်မှုဟု ခေါ်ဆိုသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် မြန်မာတပ်မတော်၏ စစ်ဆင်ရေးတို့ကြောင့် ထွက်ပြေးလာကြရပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ စခန်းများတွင် ကျပ်ညပ်စွာ နေထိုင်နေရသည်။
ယခုလ အစောပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေး မစ်ရှင်က မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပျက်ဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနောက် အချိန်ပိုပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာ တင်ပြရန် နောက်နှစ် စက်တင်ဘာအထိ အချိန်ရသွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာအရပ်သား အစိုးရ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အထောက်အကူ မပြုဟုဆိုကာ အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး သူ၏ အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည် မဟုတ်ဟု အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ၏ အစိုးရအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အခြေအနေရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ပမှ စစ်ဆေးစိစစ်မှုများကို တံခါးဖွင့်ထားသည်ဟု ယခုလ အစောပိုင်း၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted in InternationalLeaveaComment on ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားသော အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို သက်တမ်းတိုး
စုံတွဲတစ်တွဲအား ရည်းစားဟောင်းအမျိုးသားက လူမြင်ကွင်းတွင် ဓားဖြင့်ထိုးမှု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွား
အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နေရာရှိ သွေးကွက်များကို တွေ့ရစဉ်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် စုံတွဲတစ်တွဲအား ယခင်ရည်းစားဟောင်းဆိုသူက ဓားဖြင့်ထိုးမှု စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ နံနက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ စုံစမ်းသိရသည်။
စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀န်းကျင်ခန့်တွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၆) ရပ်ကွက်နေ မ… (၂၃ နှစ်) သည် နေအိမ် မှ အလုပ်သို့သွားရန် လမ်းထိပ်၌ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် စောင့်နေသည့် ချစ်သူဖြစ်သူ ကို….(၂၁ နှစ်) ထံသို့ လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လမ်းလျှောက်သွားစဉ် ကုန်းဘောင်လမ်းနှင့် အင်းဝလမ်းထိပ်အရောက် တွင် မ…(၂၃ နှစ်)အား ၎င်း၏ ရည်းစား ဟောင်းဖြစ်သူ ချစ်ပိုင်ဝင်း(၂၃ နှစ်)က အသင့် ပါလာသည့်ဓားဖြင့် လည်ပင်းအား ပြေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ချစ်ပိုင်ဝင်း (၂၃ နှစ်)မှာ မ…(၂၃ နှစ်)၏ လက်ရှိချစ်သူ ကို….(၂၁ နှစ်) အား ဓားဖြင့် ထပ်မံ ထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကောင်မလေးက အဲဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ နေတာပါ။ သူနဲ့ အလုပ်အတူလုပ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ့ကိုကားနဲ့ လာစောင့်နေတာ။ လာစောင့်နေတဲ့ ကောင်လေးဆီကို ကောင်မလေးက သွားတဲ့အချိန်မှာပဲ ကောင်မလေးရဲ့ အရင်ရည်းစားဟောင်းလား မသိပါ ဘူး။ ပြေးပြီး ကောင်မလေးလည်ပင်းကို ဓားနဲ့ ထိုးတာပါ။ အဲဒီလို ဓားနဲ့ထိုးတော့ အလုပ်အတူ ကောင်လေးက ဓားနဲ့ထိုးတဲ့သူကို ၀င်လုံးတာ။ အဲဒီချိန်မှာ ကူပါကယ်ပါဆိုပြီး အော်ဟစ်သံကြားတော့ အနားကဆိုက်ကားဆရာ တစ်ယောက်က ၀င်ပြီး ဓားနဲ့ထိုးတဲ့သူကို ၀ါးလုံးနဲ့ဝင်ရိုက်ပြီး တားလိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့မှ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေရောက်လာပြီး ဓားနဲ့ထိုးတဲ့သူကို ထွက်မပြေးဖို့ ပြောပါတယ်။ ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ ကောင်လေးကလည်း ထွက်မပြေးဘူး။ သူလုပ်ရင် သူခံမယ်ပြောပြီး ရဲတွေလာ ဖမ်းတဲ့အထိ စောင့်နေပါတယ်”ဟု ဖြစ်စဉ်အား မြင်တွေ့ခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဓားဖြင့် အထိုးခံရသဖြင့် ကို…(၂၁ နှစ်) မှာ ၀ဲရင်အုံ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ ယာ လက်ဖျံ ပွန်းပဲဒဏ်ရာနှင့် ကျောကုန်းပွန်း ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး မ…(၂၃ နှစ်) မှာ ၀ဲ လည်ပင်း ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး မ…(၂၃ နှစ်)မှာ သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဆေးရုံသို့ (စိုးရိမ်ရ) အဖြစ် တင်ပို့ထားရကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်တွင် ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့သည့် ချစ်ပိုင်ဝင်း (၂၃ နှစ်) နှင့် ဓားဖြင့် အထိုးခံရသူကို…(၂၁ နှစ်) က ဒဂုံမြောက်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို သွားရောက်စစ်ဆေးတော့ အဲဒီနေရာမှာပဲ ရပ်ကွက်ကလူတွေက ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ ကောင်လေးကို ထိန်းသိမ်း ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခု ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ ကောင်လေးကို စခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားပြီး ဒဏ်ရာရသူနှစ်ဦးကို ဆေးရုံကို တင်ထားပါတယ်။ ကနဦး စစ်ဆေးချက်အရတော့ ဓားနဲ့ ထိုးခံရတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေးက ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး ဓားနဲ့ထိုးသူက ရည်းစားဟောင်းလို့ သိရပါတယ်”ဟု သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှ ဓားဖြင့်ထိုးသူ ချစ်ပိုင်ဝင်း(၂၃ နှစ်)အား တောင်ဥက္ကလာပမြို့မ ရဲစခန်းက (ပ) ၈၉၄/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ- ၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeLeaveaComment on စုံတွဲတစ်တွဲအား ရည်းစားဟောင်းအမျိုးသားက လူမြင်ကွင်းတွင် ဓားဖြင့်ထိုးမှု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်ပုံကို အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ ဖယ်ရှား
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်ကို လက်ခံပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် ဘော့လေယန်စာကြည့်တိုက်၌ တွေ့ရစဉ် (Photo: The Times)
ဘင်္ဂါလီ (မူရင်း၌ ရိုဟင်ဂျာဟု ဖော်ပြ) မွတ်စလင် အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုင်တွယ်ပုံကို ၀ိုင်းဝန်းဝေဖန်နေမှုများအကြား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့တံဆိပ် အပ်နှင်းခဲ့သော အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်သည် ယခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်ပုံကို ၎င်းတို့ တက္ကသိုလ်မှ ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ သတင်းဌာနများက ဖော်ပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသော အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်သည် အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်။ မြန်မာအရပ်သား အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကုလသမဂ္ဂက လူမျိုးစုလိုက် သုတ်သင်မှုဟု ပြောကြားထားသော ကိစ္စအား ပြောကြားပေးရန် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် ၀ိုင်းဝန်းဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။
စိန့်ဟုခ်ျကောလိပ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်ပုံနေရာတွင် ဂျပန်ပန်းချီကား တစ်ကားဖြင့် အစားထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်ပုံနေရာ၌ အစားထိုးလိုက်သော ပန်းချီကားကို ဂျပန် ပန်းချီဆရာ ရိုရှီဟီရိုတာကာဒါက ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်ပုံကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
တက္ကသိုလ်၏ ဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာ ဘင်ဂျမင်ဂျုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်ပုံကို လုံခြုံသောနေရာသို့ ရွှေ့ထားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခု ချိတ်ဆွဲထားသော ပန်းချီကားကို ယခုလ အစောပိုင်းက ကောလိပ်သို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကောလိပ်၏ ပင်မအဆောက်အအုံ အ၀င်ဝတွင် ချိတ်ဆွဲထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ၌ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် အရပ်သား အစိုးရ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကြီးထွားလာနေသော နိုင်ငံတကာ ဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အတွင်းက ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့သော်လည်း လူမျိုးစုလိုက် သုတ်သင်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိသကဲ့သို့ မြန်မာတပ်မတော်ကိုလည်း အပြစ်တင်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် စိန့်ဟုခ်ျကောလိပ်မှ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ် အပ်နှင်းခံခဲ့ရသည်။
Posted in InternationalLeaveaComment on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်ပုံကို အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ ဖယ်ရှား
ပေါင်းတည်မြို့တွင် လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ပေးရုံဖြင့် ရောဂါများပျောက်ကင်းသည်ဟူသည့် ကလေးငယ်ထံ လာရောက်ဆေးကုသူများနေပြီး တန်းစီစောင့်ဆိုင်းရသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်
ရောဂါပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးသည်ဆိုသည့် ကလေးငယ်ထံ လာရောက်ဆေးကုသသူများ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေသည်ကို စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း)၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပေါင်းတည်မြို့တွင် လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ယုံဖြင့် ရောဂါများပျောက်ကင်းသည်ဟူသည့် ကလေးငယ်ထံ လာရောက်ဆေးကုသူများပြားနေ၍ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းရသည်အထိ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ အသက်ငါးနှစ်ကျော်ခန့် ကလေးငယ်မှာ ပေါင်းတည်မြို့၊ ကြာနီကန်အုပ်စု၊ ရှားပေါင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်နေပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်လကျော်ခန့်မှစကာ လူသိများလာခဲ့ပြီး နေ့စဉ်ဆိုသလို လာရောက်ကုသူ များပြားလာ၍ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေသူများ နေ့စဉ် ၂၀၀ နီးပါးခန့်ရှိကာ ကျောင်းပိတ်ရုံးပိတ်ရက်များတွင် ၅၀၀ ကျော်ခန့် လာရောက်ကုသလေ့ရှိကြောင်း ဒေသခံများထံက သိရသည်။
“ရွာမှာလာကုတဲ့သူတွေ အရမ်းများလာလို့ ကလေးကိုအနားရအောင်ဆိုပြီး မြို့ပေါ်မှာ လာနားနေတာ။ မရဘူး။ ဒီကိုလည်း လိုက်လာကြတာ။ ကလေးရဲ့ အတိတ်ကံကြောင့် ဒီလိုမျိုးပျောက်ကင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ကုသစရိတ်လည်းမတောင်းဘူး။ ဆိုင်းဘုတ်လည်း မတင်ဘူး။ အလှူငွေ ကြိုက်သလောက်ထည့်ပဲ။ ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်။ ကလေးလက်ကလေးနဲ့ ထိပေးသပ်ပေးရုံနဲ့ ကုပေးတာ” ဟု ကလေးငယ်၏ ဘကြီးဖြစ်သူ ဦးဝင်းထွဋ်က ပြောကြားသည်။
ကလေးငယ်အမည်မှာ မောင်ထွန်းတေဇအောင်ဖြစ်ပြီး ငါးနှစ်သားအရွယ်က ၎င်းတို့ရွာရှိ ဈေးသည်တစ်ဦး မျက်စိအနားမှ ဘုကိုကုသပေးရာက ပျောက်ကင်းခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့် သုံးလခန့်က ကျောင်းအုပ်ဆရာမတစ်ဦး လက်မှအသားပိုကို ကုသပေးရာ ပျောက်ကင်းချိန်မှစ၍ လူသိများလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အခြားရောဂါမျိုးစုံပဲ ဒီမှာလာကုကြတယ်။ ဖျားနာကအစ နာတာရှည်တွေအထိ လာကုကြတယ်လို့ သိရတယ်။ ကျွန်မတို့အမျိုးတွေလည်း လာကြတယ်။ အဆုတ်ပွတာပေါ့။ နှစ်ခါလောက်လာလိုက်တယ် ပျောက်သွားတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့်ဆိုတာတော့ ကျွန်မတို့လည်း မပြောတတ်ဘူး။ သူများတွေ ပျောက်တယ်ဆိုတော့ လာကုတာပါ။ ယုံကြည်မှုကတော့ ရှိပါတယ်” ဟု ဆေးကုလာသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောကြားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လက်ရှိတွင် ကျေးရွာတွင်မကုသဘဲ ပေါင်းတည်မြို့ပေါ်တွင် လာရောက်နားနေစဉ်မှာပင် ကုသပေးနေရကြောင်း လာရောက်သူများမှာလည်း နေ့စဉ်ဆိုသလို ပိုမိုများပြားလာနေကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on ပေါင်းတည်မြို့တွင် လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ပေးရုံဖြင့် ရောဂါများပျောက်ကင်းသည်ဟူသည့် ကလေးငယ်ထံ လာရောက်ဆေးကုသူများနေပြီး တန်းစီစောင့်ဆိုင်းရသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ကာလအတွင်း ချောင်းသာကမ်းခြေသို့ လာရောက်အပန်းဖြေရန် ဟိုတယ်များတွင် ကြိုတင်မှာယူမှုများကာ စည်ကားလျက်ရှိ
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ကာလအတွင်း ချောင်းသာကမ်းခြေသို့ လာရောက်အပန်းဖြေသူများဖြင့် စည်ကားနေသည်ကို စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ်
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ကာလအတွင်း ချောင်းသာကမ်းခြေသို့ လာရောက်အပန်းဖြေရန် ဟိုတယ်များတွင် ကြိုတင်မှာယူမှုများပြားကာ စည်ကားလျက်ရှိကြောင်း ချောင်းသာကမ်းခြေ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ သိရသည်။
ချောင်းသာကမ်းခြေတွင် ခရီးသွား လာရောက်အပန်းဖြေမှုများကာ ရုံးပိတ်ရက်များတွင် လာရောက်လည်ပတ်သူများ ပြည့်နေပြီး သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကာလဖြစ်သော အောက်တိုဘာ ၄ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ ဟိုတယ်များတွင် အခန်းကြိုတင်မှာယူမှုများ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ အထိပြည့်နေကြောင်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဆက်လက်သိရသည်။
“ဒီနှစ်ရဲ့ ရာသီဥတုအပိုင်းကလည်း မိုးကသိပ်ပြီးမများတဲ့ အခါကျတော့ ပုံမှန်ထက်စာလို့ရှိရင် နဂိုနှစ်တွေထက် သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေရက်တွေမှာ ဟိုတယ်တွေမှာ ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုတွေများတယ် သီတင်းကျွတ်ပွဲရက်ကလည်းရှည်တယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနဲ့တိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီရက်မှာ ဧည့်သည်ကျရောက်မှုကတော့ ကြိုတင်မှာထားတာတွေ ရာနှုန်း ၈၀ လောက်ရှိနေပါပြီ” ဟု ဧကရာဇ်ဟိုတယ်မှ Operation Manager ဦးညီညီအောင်က ပြောကြားသည်။
ချောင်းသာကမ်းခြေတွင် သီတင်းကျွတ်ကာလအတွင်း မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာများ မဖြစ်ပွားရန် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အသံကျယ်လောင်တဲ့ ဗြောက်အိုးများရောင်းချခြင်းမပြုအောင် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“ချောင်းသာကမ်းခြေကတော့ ဒီနှစ်လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ခရီးသွားအရမ်းများပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်ရက်မှာ လာပြီးလည်ပတ်ချင်တဲ့အသိတွေ အခန်းမှာတာ ကမ်းခြေဘက်ခြမ်းက ဟိုတယ်တွေမရတော့ဘူး။ အတွင်းဘက်တွေမှာ မှာထားရတယ်” ဟု ကမ်းခြေ ရေပြင်သက်ကယ် တာဝန်ခံဦးသန်းဌေးက ပြောကြားသည်။
ချောင်းသာကမ်းခြေတွင် လာရောက်အပန်းဖြေ ရေကစားသူများ အန္တရာယ်ကင်းစေရန် ရေပြင်တွင် သက်ကယ်ရေယာဉ်နှစ်စင်းဖြင့် စောင့်ကြပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ကျောက်တလုံးဘုရားအနီးတွင်လည်း နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ လုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခင်နှစ်တွင် မိုးများသောကြောင့် ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုနည်းပါခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားလာရောက်မှု များပြားကာ ဆောက်လုပ်ဆဲဟိုတယ်မှအပ ကျန်ရှိသော ဟိုတယ်များအား လုံးဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ကာလအတွင်း ချောင်းသာကမ်းခြေသို့ လာရောက်အပန်းဖြေရန် ဟိုတယ်များတွင် ကြိုတင်မှာယူမှုများကာ စည်ကားလျက်ရှိ
ကသာခရိုင်အတွင်းရှိ ပရဟိတအဖွဲ့များက အကူအညီလိုအပ်နေသော ရခိုင်ပြည်သူများအား ကူညီနိုင်ရန် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကျော်နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင်အတွင်းရှိ ပရဟိတအဖွဲ့များ စုပေါင်းပြီး အကူအညီလိုအပ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်သူများကို ကူညီနိုင်ရန်အတွက် ကသာခရိုင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနသို့ ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကျော်နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ဧရာကမ်းသာ လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ကိုကျော်မျိုးဦးက ပြောကြားသည်။
ဧရာကမ်းသာ လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ကိုကျော်မျိုးဦးက “ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဒုက္ခရောက်နေပြီး အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကို ကူညီနိုင်ရန်အတွက် ကသာ၊ ဗန်းမောက်၊ အင်းတော်၊ မော်လူးမှာရှိတဲ့ ပရဟိတညီအစ်ကိုတွေ ပူးပေါင်းပြီး အလှူခံတယ် အလှူခံတဲ့နေရာမှာ Pandora Music Band နဲ့ Level One Music Band တို့ပူးပေါင်းပြီး တေးသီချင်းများနဲ့ အလှူခံပါတယ်။ အစပိုင်းက ရခိုင်အရောက်သွားရောက်ဖို့ရာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေအကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မသွားဖြစ်တော့ပဲ ကသာခရိုင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနကို ဒီနေ့လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ကသာ၊ ဗန်းမောက်၊ အင်းတော်၊ မော်လူးမှာ ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း အလှူငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရရှိငွေတွေကို ကသာမြို့မြို့တော်ခန်းမမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ကသာခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပရဟိတညီအစ်ကိုတွေရှေ့မှာ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
ကသာခရိုင်အတွင်းရှိ ပရဟိတအဖွဲ့များမှ အကူအညီလိုအပ်နေသော ရခိုင်ပြည်သူများကို ကူညီနိုင်ရန် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကျော်နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီမှာ ကသာမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ကသာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင့်ဝေသုန်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကသာ၊ ဗန်းမောက်၊ အင်းတော်၊ မော်လူးမှ ပရဟိတ လူမှုကူညီရေးအသင်းများ တက်ရောက်ခြဲ့ကကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on ကသာခရိုင်အတွင်းရှိ ပရဟိတအဖွဲ့များက အကူအညီလိုအပ်နေသော ရခိုင်ပြည်သူများအား ကူညီနိုင်ရန် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကျော်နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်း
အာဆင်နယ်နှင့်ပွဲအား ရက်မရွှေ့ရန် ယာဂန်ကလော့ပ် တောင်းဆို
လီဗာပူးလ်အသင်းနည်းပြ ယာဂန်ကလော့ပ်က အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်ကစားရမည့်ပွဲစဉ်အား ခရစ္စမတ်မတိုင်မီ တစ်ရက်အလို ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းမပြုရန် တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
အီမရိတ်စ်ကွင်း၌ကစားရမည့် ယင်းပွဲစဉ်အား ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ကျင်းပရန် ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်သော်လည်း Sky ရုပ်သံ ဌာနက ၂၂ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ကစားစေရန် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
အကယ်၍ ရက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပါက လီဗာပူးလ်အသင်းသည် နှစ်သစ်ကူးပွဲကျပ်ကာလတွင် ကိုးရက်အတွင်း လေးပွဲအထိ ကစားရမည်ဖြစ်ရာ ကလော့ပ်က “ဒီလိုညမျိုးမှာ ဘယ်သူက ဘောလုံးပွဲကြည့်ချင်လဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်လို့တောင်မရပါဘူး။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ညမျိုးတွေမှာ ဘောလုံးထက် တခြားအရာတွေကိုပဲ အာရုံစိုက်နေမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကသာ ခရစ္စမတ်အကြိုရက်မှာ ဘောလုံးပွဲကြည့်ချင် တယ်ဆိုရင် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်သူတွေက နည်းလမ်းရှာဖွေကြမှာဖြစ်သလို ရှာတွေ့ပြီးလည်း ဖြစ်မှာပါ။ အရင်တုန်းကတော့ ဒီလိုရက်မျိုးမှာ ဘောလုံးပွဲကစားဖို့ ဖြစ်နိုင်လားဆိုတာ မသိပေမယ့် အခုတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာသိပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်မှာ ကစားရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆန့်ကျင်နိုင်မလားဆိုတာ မသေချာပါဘူး”ဟု ပြောကြားသည်။
Posted in SportLeaveaComment on အာဆင်နယ်နှင့်ပွဲအား ရက်မရွှေ့ရန် ယာဂန်ကလော့ပ် တောင်းဆို
ရွှေကျင်မြို့တွင် (၁၆၆) ကြိမ်မြောက် သီတင်းကျွတ် မီးမျှောပူဇော်ပွဲနှင့် လှေလှော်ယိမ်းအကပြိုင်ပွဲများ စည်ကားစွာ ကျင်းပမည်
ရွှေကျင်မြို့တွင် ကျင်းပသော သီတင်းကျွတ် မီးမျှောပူဇော်ပွဲနှင့် လှေလှော်ယိမ်းအကပြိုင်ပွဲအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဇော်ဝင်းချစ်)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရွှေကျင်မြို့တွင် (၁၆၆) ကြိမ်မြောက် သီတင်းကျွတ် မီးမျှောပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ရှင်ဥပဂုတ္တမီးမျှော ပူဇော်ပွဲနှင့် တက်ပျံယိမ်း၊ တက်ခုတ်ယိမ်းအက အလှပြိုင်ပွဲများအား အောက်တိုဘာ ၅၊ ၆ ရက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့နှင့် လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့တို့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မြို့တွင်းလှည့်လည်တာတို့၊ ရှင်ဥပဂုတ်ပင့်ပြီးတော့ အပူဇော်ခံတာတို့ အလှူခံတာတို့ကတော့ စနေပြီလေ ဈေးပွဲတန်းပေါ့။ လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့မှာက ရေပွဲဆိုတာ တက်ခုတ်တက်ပျံတို့ ယိမ်းတွေယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ဖျော်ဖြေမှုတွေက အဲဒီနေ့မှာပဲ၊ ရှင်ဥပဂုတ် မီးမျှောပူဇော်ပွဲက ၇ နာရီမှာပိတ်မှာလေ။ အဲဒီအစီအစဉ်အတိုင်းပဲ သွားမှာပါ၊ စုစုပေါင်းယိမ်းရယ်၊ တက်ခုတ်တက်ပျံရယ်၊ တိုင်းရင်းသား ယိမ်းအဖွဲ့ရယ် ရိုးရိုးအလှပြယိမ်းအဖွဲ့တွေရယ်ဆို ၁၇ ဖွဲ့ပေါ့။ ပြိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကို ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့စရိတ် အကုန်ပေးမှာ။ တက်ခုတ်တက် ပျံယိမ်းပြိုင်ပွဲကတော့ လပြည့်ရယ်၊ လပြည့်ကျော်ရယ် နှစ်ရက်ပေါ့။ ဈေးပွဲတော်ကတော့ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၈ ရက်ကစတယ်။ အခုစနေပြီပေါ့” ဟု ရွှေကျင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်မြင့်ဌေးက ပြောကြားသည်။
ရွှေကျင်မြို့၏ သီတင်းကျွတ် မီးမျှောပူဇော်ပွဲအား နှစ်စဉ်သီတင်းကျွတ်လရောက်တိုင်း ကျင်းပလျက်ရှိရာပွဲတော်ကို ကုန်းပွဲနှင့် ရေပွဲဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။ ကုန်းပွဲအား သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၈ ရက် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မှ စတင်ကျင်းပလျက်ရှိပြီး၊ ဇာတ်ပွဲများ ကပြဖျော်ဖြေခြင်း၊ ၁၂ ပွဲဈေးများ ခင်းကျင်းရောင်းချခြင်း၊ မီးမျှောပွဲတော် အထိမ်းအမှတ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအား သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီ ၀န်းကျင်ခန့်၊ အင်အား ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် စုပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေပွဲဖြစ်သည့် ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်အား မီးမျှောပူဇော်ပွဲနှင့် တက်ခုတ်ယိမ်း၊ တက်ပျံ ယိမ်းအကအလှပြိုင်ပွဲအား သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့တွင် နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၇ နာရီအထိ ရွှေကျင်ချောင်းအတွင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေပွဲတော်ကျင်းပရာတွင် တက်ခုတ်တက်ပျံငါးဖွဲ့၊ ကရင်တိုင်းရင်းသား၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့လေးဖွဲ့၊ ရိုးရိုးတက်ခုတ်လေးဖွဲ့၊ ရိုးရိုးပြိုင်ပွဲဝင်ယိမ်းအဖွဲ့လေးယိမ်း စုစုပေါင်း ၁၇ ဖွဲ့တို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ဆုများချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
မီးမျှောပူဇော်မည့် အစီအစဉ်မှာ ည ၇ နာရီတွင် ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ် ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူသော ကရ၀ိတ်ဖောင်တော်ကြီးအား ရွှေကျင်ချောင်းအတွင်း လက်ယာရစ်သုံးပတ် လှည့်လည်နေစဉ် ပွဲတော်လာရောက်ကြသူများက မီးကြာခွက်များပူဇော်ခြင်း၊ မီးရှူးမီးပန်းများ ပစ်ဖောက်ပူဇော်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြကာ မီးကြာခွက် တစ်သောင်းဝန်းကျင်ခန့် မီးမျှောပူဇော်ကြကြောင်း ကျင်းပရေးကော်မတီအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ရွှေကျင်မြို့၏ သီတင်းကျွတ်မီးမျှောပွဲမှာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၁၃ ခုနှစ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်ကာလ၌ တောင်တွင်းမြို့ဝန် ဦးကျောက်လုံးဦးစီးပြီး စစ်သည်အင်အားတစ်သောင်းကျော်ဖြင့် ရွှေကျင်မြို့မှနေ၍ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အား တိုက်ခိုက်ရန် ပဲခူးစစ်ကြောင်းမှ စစ်ချီတက်လာစဉ်ကတည်းက ကျင်းပခဲ့သောပွဲတော်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးကျောက်လုံးက ရွှေကျင်မြို့တွင် စခန်းချအုပ်ချုပ်နေစဉ် ကာလတွင်လည်း ရေပွဲသဘင်ကို ခမ်းခမ်းနားနား ပူဇော်ခဲ့သောပွဲတော်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် (၁၆၆) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပွဲတော်ကျင်းပနေစဉ်တွင် ရွှေကျင်ချောင်းအတွင်း စက်လှေများဖြင့် လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုသူ လည်ပတ်ကြသူများပြားပြီး ရွှေကျင်ကမ်းနားတစ်လျှောက် လည်ပတ်ကြသူများဖြင့် ပြည်သူတစ်သိန်းဝန်းကျင်ခန့် လာရောက်လည်ပတ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on ရွှေကျင်မြို့တွင် (၁၆၆) ကြိမ်မြောက် သီတင်းကျွတ် မီးမျှောပူဇော်ပွဲနှင့် လှေလှော်ယိမ်းအကပြိုင်ပွဲများ စည်ကားစွာ ကျင်းပမည်
ကလေးဝမြို့ကို ရေဖြန့်ဝေပေးနေသော ရေစက်ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း နစ်မြုပ်သွားသဖြင့် ရေသုံးစွဲရန် တစ်လခန့်ခက်ခဲမည်
ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း နစ်မြုပ်သွားသော ကလေးဝမြို့အား ရေပေးဝေနေသည့် ရေစက်ကို တွေ့ရစဉ်
ကလေးဝတစ်မြို့လုံးကို မြစ်ရေဖြန့်ဝေပေးနေသော ရေစက်ကြီးသည် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းက ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း နစ်မြုပ်သွားသဖြင့် ရေသုံးစွဲရန်အတွက် တစ်လခန့် ခက်ခဲနေမည်ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုနိုင်က ပြောကြားသည်။
“ကလေးဝတစ်မြို့လုံးကို ရေပေးဝေနေတဲ့ ရေစက်ကြီးက မီးစက်မောင်းနေရင်းနဲ့ ပိုက်ပြုတ်ပြီး ရေတွေက အတွင်းထဲကျလို့ မြုပ်သွားတာ။ မနေ့ကတည်းက ပြန်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ။ အခုထိမရသေးဘူး။ ရေပြန်ပေးဝေနိုင်ဖို့ဆိုတာ တစ်လလောက်တော့ ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အင်ဂျင်ပြန်ကိုင်ရမှာနဲ့ ဘာနဲ့။ ဒီဇယ်စက်လေးလုံးထိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ကော်နက်တင်းတွေ ဘာတွေက တော်တော်ပြင်ယူရမယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်အထိ စက်ကဖော်ယူလို့မရသေးဘူး။ ဆယ်ယူဖို့အတွက် အဆင်မပြေသေးဘူး။ ရေကတော့ ဒီနေ့ကစပြီး မပေးဝေနိုင်တော့ဘူး။ မနေ့က ပေးနေတာကလည်း လုံလောက်အောင်မရဘူး။ အခုတော့ စည်ပင်ကားတွေ၊ မီးသတ်ကားတွေနဲ့က လိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီး ဖြည့်ပေးနေတာရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း သင့်တင့်တဲ့နှုန်းထားတော့ ရှိမှာပါ။ ရှေ့လျှောက်ကို ဒီရေစက်ကြီးကို စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကို လွှဲပြောင်းပြီးလုပ်မလား ဒါမှမဟုတ် တင်ဒါနဲ့ ပုဂ္ဂလိကကိုပေးပြီးတော့ လုပ်မလားပေါ့။ ကော်မတီနဲ့တော့ ရေရှည်လုပ်လို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ လုပ်ငန်းချို့ယွင်းတာတွေ များပြားလာတာပေါ့။ မြို့ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းကို တင်ဒါနဲ့ မြို့အတွက် ဘယ်လောက်၊ စည်ပင်ခွန်ဆောင်ပေါ့။ အကျိုးအမြတ်အတွက် သူ့အတွက်တွက်ပြီး လုပ်ကြပေါ့။ ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ ရေအတွက် တော်တော်ခက်သွားမယ်။ တစ်မြို့လုံးနီးပါးက ဒီရေပေးဝေရေးက သုံးတာကိုး။ မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်အားလုံးက ရေပေးဝေရေးကို မှီခိုနေရတာ။ အခက်အခဲက ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူး။ ဆယ်ယူတာ၊ စက်ပြင်တာနဲ့တွက်တော့ တစ်လလောက်ကြာမယ် မှန်းထားတယ်။ ဒေသအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းကတော့ ၀င်မပါသေးဘူး။ သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကို စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့။ လိုအပ်တဲ့ရေကိုတော့ စည်ပင်ကားတွေ၊ မီးသတ်ကားတွေနဲ့ ရေကို အကူအညီတောင်းခံပြီး လုပ်နေရတာ” ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုနိုင်က ပြောကြားသည်။
“ရေတင်တဲ့သူက ရေတင်ထားပြီး မုန့်သွားစားတာလို့ပြောတယ်။ အမှန်က အစောင့်မရှိတာ။ အစောင့်မရှိတော့ ပိုက်က ပြုတ်နေတာမသိတော့ ရေတွေက ဆိပ်ခံထဲဝင်သွားပြီး မြုပ်သွားတာ။ အဲဒီရေတင်တဲ့စက်ကြီးကို ပြန်ဆယ်ပြီးတော့ အင်ဂျင်ပြန်ကိုင်ရဦးမယ်ဆိုတော့ ၁၀ ရက်လောက်တော့ ကြာဦးမယ်။ စက်က ဆိပ်ခံနဲ့တွဲထားတာ။ ရေ၀င်တော့ မြုပ်သွားတာ။ စက်တွေက ရေမြုပ်တော့ အကုန်ပြန်ဆေးရဦးမှာ။ ရေမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် သုံးရေပြတ်လပ်မှုဖြစ်မယ်။ ချိုးရေကတော့ သွားချိုးလို့ရတယ်။ မြို့ပေါ်က ဒီရေပေးဝေရေးကရေကို အဓိက အားထားသုံးကြရတာ။ ဒီလို ရေပေးဝေရေးစက်ကြီးနဲ့ မြို့ရေပေးလာတာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်နေပြီ။ တစ်ခါမှဒီလိုမဖြစ်ဖူးဘူး။ အခုက တစ်လကို အိမ်တစ်အိမ်အတွက် တစ်လ ကျပ် ၄၀၀၀ ပေးရတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ လုပ်ငန်းသုံးတို့ဆိုရင်တော့ ဈေးတစ်မျိုးပေါ့” ဟု ကလေးဝမြို့ခံ ကိုကံကောင်းက ပြောကြားသည်။
Posted in NewsLeaveaComment on ကလေးဝမြို့ကို ရေဖြန့်ဝေပေးနေသော ရေစက်ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း နစ်မြုပ်သွားသဖြင့် ရေသုံးစွဲရန် တစ်လခန့်ခက်ခဲမည်